NZeTA, Visa eTA nke New Zealand
New Zealand Njem Visa
New Zealand eTA Isi
Isadị Visa New Zealand
Akwụkwọ Ntuziaka Ngwa
Na-abịa site na isegbọ mmiri
Kè-ala Security Check
Emee ihe omume enyere na NZeTA
Ndụmọdụ ndị njem nleta
New Zealand eTA maka ụmụ amaala US
New Zealand eTA maka ụmụ amaala EU
New Zealand eTA maka ụmụ amaala Canada
New Zealand eTA maka ụmụ amaala Britain
New Zealand eTA maka ụmụ amaala French
Ozi ndi nleta
Ndụ New Zealand
Ama na Weather
Ire nke Maori Culture
Ndị Glaciers Na-ewu ewu
Ememme na New Zealand
Ringgagharị Ugwu Cook
Ozi ndị ọzọ »
Ugwu dị elu na New Zealand
Ahụmịhe nke Onyenwe Mgbaaka
Lọ oriri na ọ Auụ Bestụ kacha mma Auckland
Kasị hụrụ NZ Sports
Ihe kachasị mma na New Zealand
Gba ọsọ na New Zealand
Digbọ mmiri na New Zealand
Nnụnụ na Anụmanụ
Zealandzọ Njem New Zealand
Nri New Zealand pụrụ iche
Nduzi njem nlegharị anya nke Chatham Islands
Oge 24 na Auckland
Kedu ihe bụ New Zealand eTA?
Achọrọ m eTA New Zealand?
NZeTA na Visa New Zealand
Na-abịa site na Cruise ụgbọ mmiri?
Ogologo oge ole ka NZ eTA dị maka?
Ogologo oge ole ka m nwere ike ịnọ?
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị »
Visa eTA nke New Zealand
New Zealand emeghewo ókèala ya nye ndị ọbịa nke mba ụwa na-adị mfe itinye usoro ntanetị maka ntinye ntinye site na eTA ma ọ bụ ikike njem njem Electronic. Ọchịchị a bụ malitere na August 2019 site na Gọọmentị nke New Zealand. Na Visa eTA nke New Zealand na-enye ohere ndị bi na Mba 60 Visa Waiver iji nweta Visa Online a. A na-akpọkwa mba New Zealand Visa Waiver Visa Visa. Visa Visa eTA a na-enye aka na Nchekwa Nleta Ndị Nleta Mba na njem nleta ka gọọmentị wee nwee ike lekọta ma lekọta gburugburu ebe obibi na ebe ndị njem nleta nke ndị ọbịa bịara na New Zealand.
Ndị njem niile na-abịa New Zealand maka njem dị mkpirikpi kwesịrị itinye akwụkwọ maka New Zealand Esta, nke a gụnyere ndị ọrụ ụgbọ elu nke ụgbọ elu na ụgbọ mmiri. Enweghị iwu chọrọ:
Gaa Leta obodo New Zealand Embassy.
New Zealand consulate ma ọ bụ High Commission.
Buru paspọtụ gị maka stampụ New Zealand na usoro akwụkwọ.
Mee oge ị ga-agba ajụjụ ọnụ.
Lezienụ na nlele, ego ma ọ bụ na tebulu.
Usoro dum nwere ike mezue na weebụsaịtị a site na odi mfe Zealanddị Ngwa Esta New Zealand. Enwere ajụjụ ole na ole dị mkpa iji zaa na ụdị ngwa a. Applicationdị ngwa a nwere ike mezue na nkeji abụọ (2) ihe dị ka ọtụtụ ndị na-enyocha ndị gọọmentị New Zealand gbara ajụjụ tupu ịmalite. N'ime awa 72 ka mkpebi mere site n'aka ndị ọrụ Immigrashọn nke Ọchịchị New Zealand a ga-amara gị ọkwa maka mkpebi na nnabata site na email.
Nwere ike ịga leta ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ ụgbọ mmiri nwere otu elektrọnik dị nro nke Visa Visa New Zealand a kwadoro ma ọ bụ ịnwere ike ibipụta ya na akwụkwọ anụ ahụ wee buru ya gaa ọdụ ụgbọ elu. Rịba ama na New Zealand Esta a bụ dị irè ruo afọ abụọ.
Mgbe ị gbara akwụkwọ maka Visa New Zealand eTA, anyị anaghị arịọ maka paspọtụ gị n'oge ọ bụla, mana anyị ga-echetara gị na e kwesịrị inwe peeji abụọ (2) oghere na paspọtụ gị. Nke a bụ ihe ndị ọrụ na-ahụ maka ọpụpụ n'ọdụ ụgbọ elu dị n'obodo gị chọrọ ka ha wee nwee ike itinye stampụ ntinye / ụzọ mbata na paspọtụ gị maka njem gị na New Zealand.
Otu uru ndị ọbịa bara na New Zealand bụ na ndị isi gọọmentị nke New Zealand agaghị eme ka ị laghachi n'ọdụ ụgbọ elu n'ihi na a ga-eme nyocha nke ngwa gị tupu ị bịarute, ị gaghịkwa enwe ike ịlaghachi na ọdụ ụgbọ elu / ụgbọ mmiri na obodo gị n'ihi na ị ga-enwe ezigbo eTA Visa maka New Zealand. Ọtụtụ ndị ọbịa ga-alaghachi na ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụrụ na ha nwere mmejọ n'oge gara aga megide ha na ndekọ ha.
Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọzọ na nkọwa achọrọ, biko kpọtụrụ anyị Nyere ndị ọrụ aka.
Gbaa mbọ hụ na inyochare nke a ntozu maka New Zealand eTA.
Ọ bụrụ na inwere site na a Obodo Waiver Visa mgbe ahụ ị nwere ike itinye akwụkwọ maka eTA n'agbanyeghị ọnọdụ nke njem (Ikuku / Irughari). Citizensmụ amaala United States, Citizensmụ amaala Canada, Citizensmụ amaala German, na Kingdommụ amaala United Kingdom nwere ike tinye ntanetị maka New Zealand eTA. Ndị bi na United Kingdom nwere ike ịnọ na New Zealand eTA maka ọnwa 6 ebe ndị ọzọ nọ ụbọchị 90.
Biko tinye akwụkwọ maka New Zealand eTA awa 72 tupu ụgbọ elu gị.
Jiri NZeTA tinye
ỌH ZR Z ZEALAND eTA
NEW ZEALAND eTA nyochara
NZETA AP FOR IWU
NZETA ELIGIBILE MBA
NZeTA VISA WAIVER MBA
NZETA ỌZỌ ỌZỌ
Ntuziaka maka ntuziaka
MGBE MB MERE
Nyochaa oke nchebe
NZeTA na VISA nkịtị
EBERE NA EBERE NA NZeTA
Na-abịa site na ụgbọ mmiri CRUISE
MGBE MBIR bịara
OZI OZI ZEALAND
EGO na ihu igwe Ama
NTU AKA MAKA OZI OZO MAORI
Ndị a ma ama na-egbuke egbuke
Ememme ndị dị na NEW ZEALAND
Na-enyocha nri achịcha
PIR NEW NEWB NEWR Z ELỌ ZEALAND
CHATHAM ISLANDS Nduzi
IJU IJU OGO
TOP 10 Osimiri
ONYENWE ANY R NWANY EX AH EX
Kacha mma AUCKLAND UClọ oriri na ọUCụ .ụ
TOP ỌZỌ NA NZ
Ibanye na NEW ZEALAND
NA-EGO N'ELU NEW ZEALAND
Nnụnnụ & Anụmanụ
ỌH ZR Z ZEALAND ụzọ ụzọ
ABEL TASMAN MGBE NSỌ
Ogige NKE FIORDLAND
24 HOUR NA AUCKLAND
Ọgba WAITOMO GLOWWORM
ỤLỌ & Ọnọdụ
Tinye maka NZeTA
© nwebisiinka nke www.new-zealand-visa.co.nz
Ngọnarị: New Zealand eTA / Visa nke webụsaịtị azụmaahịa a na-etinye n'ọrụ ozugbo na gọọmentị webụsaịtị gọọmentị nke Immigrashọn New Zealand (www.immigration.govt.nz). Anyị na-enyere ndị na-ahụ maka ndị njem na ndị njem aka n'akụkụ ụwa niile aka. Gọọmentị New Zealand ahọpụtaghị weebụsaịtị a ozugbo, n'ụzọ na-enweghị isi ma ọ bụ naanị. A na-akwụ ụgwọ ego ọkachamara maka ọrụ anyị maka ndị na-etinye na weebụsaịtị a. Enwetakwu ihe ọmụma banyere ụgwọ anyị dị na nke anyị gbasara anyị page.